Njani abathengisi beB2B kufuneka benyuse amaQhinga abo okuThengisa uMxholo | Martech Zone
Baza kuthi njani abathengisi beB2B baNyathele kwiQhinga labo lokuThengisa
Lwesine, ngoFebruwari 9, 2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Njengoko siqhubeka ukwenza udliwanondlebe neenkokheli zentengiso, uphando kwiindlela ezikwi-Intanethi, kwaye sibona iziphumo zamalinge ethu okunceda abathengi bethu, akukho mathandabuzo kumandla wentengiso yokuqulatha iinzame zokufumana zeB2B. Amashishini aphanda ukuthengwa kwawo okulandelayo kwi-Intanethi kunakuqala.
Ingxaki, nangona kunjalo, kukuba iinkampani zivelisa umxholo ongasebenzi kakuhle. Xa abathengisi be-B2B abaphumeleleyo babuzwa isizathu sokuba kutheni ukuthengisa umxholo wabo kusebenza, i-85% yafumana amanqaku umgangatho ophezulu, umxholo osebenzayo indalo ngaphezulu. Siyaqhubeka nokutyhala a ilayibrari yomxholo thetha nabathengi bethu apho sibhala khona amathuba kunye nezikhewu kumxholo wabo, kwaye sisebenzela ukuvelisa umxholo, izihloko ezikumgangatho ophezulu.
Indlela yokuthengisa ecwangcisiweyo ijolise ekudaleni nasekuhambiseni umxholo oxabisekileyo, ofanelekileyo, kunye nohambelanayo ukutsala nokugcina abaphulaphuli abachazwe ngokucacileyo- kwaye, ekugqibeleni, ukuqhuba isenzo sabathengi esinenzuzo.
I-47% yabathengisi be-B2B bathi banemiceli mngeni ekunikezeleni ngezixhobo kwisicwangciso-qhinga sentengiso sayo.
Umzekelo, sinomthengi omnye esimcwangcisela kusasa kusasa inyanga nganye ukurekhoda iipodcast ezininzi. Kwangelo xesha, sikwarekhoda kwividiyo. Emva koko siyazi kakuhle iipodcast, sivelise iividiyo, sizidlulisele kubabhali bethu, sivelise amanqaku eendaba ezizezomntu kunye nesizifumeneyo, emva koko sidibanise iziphumo ngokuzenzekelayo kwincwadana yeveki. Ukusebenza ngempumelelo kubangela iqhezu lexesha elichithwe kuphuhliso lomxholo kunye nokunyusa ukuzibandakanya ngenxa yolungelelwaniso kumajelo onke.
Iinkampani akufuneki zijonge inkxaso-mali eyongezelelweyo okanye oovimba bokuthengisa umxholo xa uninzi lomxholo wabo ayivelisi iziphumo. Ukuba iinkampani, endaweni yoko, zinciphise umthamo womxholo oveliswe kakubi kwaye zijolise kumxholo obandakanyeke kakhulu, ofanelekileyo, kunye nomnqweno, banokugcina ixesha kunye nokunyusa ifuthe leenzame zabo.
NgokweZiko lokuThengisa uMxholo, Iipesenti ezingama-39 ziceba ukwanda umxholo wabo wokuthengisa kwintengiso kwezi nyanga zilishumi elinambini zizayo
Ngomhlaba osoloko utshintsha wentengiso yomxholo, ukugcina kunye neendlela zamvanje kunye nezixhobo kuye kwanyanzeleka, yiyo loo nto iinkampani ezininzi nangakumbi ngoku zisenza ingcinga yokwenza isicwangciso-qhinga sabo sisebenze kangangoko kunokwenzeka kwiminyaka ezayo. Ezi nkampani zikulungele ukuchitha imali eninzi exhasa isicwangciso sayo sentengiso kulo nyaka uzayo. IqelaM liqikelela ukuba inkcitho yeenkonzo zentengiso zizonke ziya kudlula $ 1 zezigidi imibundu okokuqala ngo-2017. Jomer Gregorio, Intengiso yeDijithali Philippines
Nantsi infographic enomdla emangalisayo, Iindlela zeNtengiso ye-B2B kwi-2017.
tags: 2017b2bb2b umxholo wentengisoUkuthengisa kwe-b2bb2b iindlela zentengisoUkuThengiswa kweMpahlaumxholo wentengisointengiso yedijithali Philippinesiintsingiselo
Ingingqi: Papasha, Lawula kwaye uNyuse iZiganeko zakho kwi-Intanethi
Ixabisa malini iindleko zokuSasazwa kwezeNtlalo?